डिसी क्षेत्रमा खोले नेपाली चिकित्सकहरुले २४ घन्टाभित्र कोभिड परीक्षणको नतिजा दिने प्रयोगशाला - Enepalese.com
डिसी क्षेत्रमा खोले नेपाली चिकित्सकहरुले २४ घन्टाभित्र कोभिड परीक्षणको नतिजा दिने प्रयोगशाला
विजय थापा २०७७ पुष १८ गते २३:२९ मा प्रकाशित
डिसी महानगर क्षेत्र । अमेरिकामा अध्ययन गरि अमेरिकामै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका केही चिकित्सकहरुको एक समूहले २४ घन्टाभित्र कोभिड परीक्षण गरि नतिजा दिने प्रयोगशाला संचालनमा ल्याएका छन ।
अमेरिकामा पिसिआर कोभिड परीक्षणको परिणामको लागि कम्तिमा २-३ दिन सम्म प्रतिक्षा गर्नु पर्ने समयमा चौबिस घण्टाभित्र नै जाँच गरि परिणाम दिने क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स नामक प्रयोगशाला खोलिएको छ ।
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको बेथेस्डा शहरमा खोलिएको उक्त डायग्नोस्टिक्सले द्रुत, सुविधाजनक,गुणस्तरीय पीसीआर कोभिड परीक्षणको लागि डिसीमहानगर क्षेत्रमा सेवा सुरू गरेको छ ।
यस क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स कस्तो प्रकारको प्रयोगशाला हो ? कस्ता प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्दछन ? र यस समूहमा को को छन त भने जिज्ञाशामा समूह मध्ये कै एक सदस्य चिकित्सक अनिल सुवालले धेरै कुराको जानकारी ईनेप्लिजलाई गराए।
चिकित्सक सुवालले अगाडी भने यसले नेपाली समुदायलाई ठूलो राहत हुनेछ किनभने परीक्षण गराउन समेत अलमलमा पर्ने,कहाँ जाने र के गर्ने जस्ता अनगिन्ती सवालहरु उब्जिने भएकोले नेपाली समुदायको सेवा र हितको लागि पनि यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
उनले नेपाली समुदायले सरल रुपमा क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्समा बारेमा जान्न सकुन भन्दै सविस्तार यसरी प्रयोगशालाको लागि आउने जिज्ञाशाहरुलाई यसरी उत्तर दिएका छन् ।
हाल नेपाल जान कोरोना जाँच गराएता पनि २-३ दिन लाग्ने भएको अवस्थामा अब नेपाली समुदायलाई २४ घण्टामै कोभिडको पीसीआर जाँच गरी नतिजा दिने व्यबस्था गरिएको उनले जानकारी गराए ।
क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स बारेमा बिस्तृत जान्न निम्न बुदाहरु उपयोगी हुने छन् ।
कस्तो प्रकारको प्रयोगशाला (ल्याब) हो ?
यो संघीय रूपमा र मेरील्याण्ड राज्यद्वारा इजाजतपत्र प्राप्त मान्यता पाएको उच्च जटिलता आणविक प्रयोगशाला (ल्याब) हो ।
कस्तो प्रकारको सेवाहरू उपलब्ध छन् :
नाक स्वाब(कूची )बाट कोभिडको लागि आरटि पिसीआर जाँच गरिने छ भने चाँडै कोभिड एन्टिबडी(रोग प्रतिरोध क्षमता) परीक्षण समेत गरिने भएको छ ।
क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स किन?
गुणस्तर परीक्षणको लागि उक्त प्रयोगशालाकै कार्यस्थलमा सूक्ष्मजीव बैज्ञानिक हुने भएकोले परिणाम २४ घण्टा भित्रै प्रदान गरिने छ । क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्सले बिरामीहरुको गोपनीयता र सुरक्षाको लागि एचआइपिएएन(हिप्पा) अनुरूपको प्रयोगशाला प्रणाली रहेको र जाँच गरे पछि परिणामहरू अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्ने क्षमता समेत भएको उल्लेख गरेको छ । र, छिटो नतिजा चाहनेले आवश्यक परेमा यसलाई प्रिन्ट (मुद्रण)समेत गरि लिन सकिने छ ।
भुक्तानी अर्थात् पेमेन्ट ?
बिमा संस्थाहरुले कोरोनाका लक्षण भएका व्यक्तिको लागि निम्ति १००% भुक्तानी गर्ने छ। यदि बीमा छैन तर सामाजिक सुरक्षा संख्या (सोसल सेक्युरिटी नम्बर ) छ भने यो संघीय सरकारले परीक्षणको लागि भुक्तानी गर्नेछ। यदि व्यक्तिगत कारणका लागि परीक्षणको आवश्यकता छ भने केवल १ सय डलरमा परीक्षण गर्न सकिने छ ।
के परीक्षणको लागि चिकित्सकको सिफारिस या आदेश चाहिन्छ?
तपाईंलाई परीक्षणको लागि चिकित्सकको आदेश या सिफारिस आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । यस समयमा यसलाई उपभोक्ता आधारित परीक्षणको रूपमा लिइन्छ भनिएको छ ।
भबिष्यमा क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्सले घरमै सङ्कलन उपकरण पठाउने योजनामा रहेको जनाएको छ भने जबसम्म बिरामीले स्वाब संकलन गर्न सजिलो महसुस गर्न सक्दछन ।
यसको साथै द्रुतसेवाका फेडेक्सले रात्री सेवा समेत प्रदान गर्ने छ । तर ढुवानी खर्च भने ग्राहकहरूले बेहोर्नु पर्नेछ । केही राज्यहरूसँग आफ्नो राज्यको स्याम्पल (नमूना)राज्य बाहिर ओसार पसार गर्न निषेध गरेको छ र ती राज्यका बासिन्दाहरूको सेवा गर्न असमर्थ रहेको समेत जनाएको छ ।
क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स किन सुरु गरिएको हो :
अमेरिकामा रहेका ठुला स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरु जस्तै ल्याबकर्ब र क्वेस्ट कम्पनीहरूले प्राय जाँचको नतिजा दिन ३ दिन सम्म लगाउने गर्छन । एक चिकित्सक भएको नाताले कोरोना फैलन र रोक्न समयमै नतिजा दिनेलाई प्राथमिकतामा राखिएको समूहका चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्समा संलग्न को को छन् :
क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स प्रयोगशालामा संलग्न नेपाली मूलका चिकित्सकहरुमा चिकित्सक अनिल सुवाल, एमडी, पारिवारिक चिकित्सा /आकस्मिक हेरचाह विशेषज्ञ,नवीन रायमाझी, पीएचडी(विद्यावारिधि) क्लिनिकल माइक्रोबायोलजी(चिकित्सा सूक्ष्मजीव-विज्ञान),किरण ढकाल, पीएचडी((विद्यावारिधि) क्लिनिकल प्रयोगशाला र विष विज्ञान विशेषज्ञ रहेका छन् ।
यसै गरि चिकित्सक राजु विश्वकर्मा सेन्चुरी ,एमडी,पल्मोनोलजी र क्रिटिकल केयर (छाती रोग तथा सुक्ष्म हेरचाह विशेषज्ञ),चिकित्सक गुणराज सुवेदी, एमडी, आन्तरिक चिकित्सा / प्राथमिक हेरचाह विशेषज्ञको साथै चिकित्सक राजेश सुवेदी, एमडी,पारिवारिक चिकित्सा / प्राथमिक हेरचाह विशेषज्ञ संलग्न रहेका छन ।
उक्त क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्सको नेतृत्व सूक्ष्म जीवविज्ञान विशेषज्ञ नवीन रायमाझी जो रोग-विषयक (क्लिनिकल) र संक्रामक सुक्ष्मजीव बिज्ञानका प्राध्यापक हुन् । जसले अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी )लगायत अन्य क्षेत्रमा अनुभव बटुली सकेका छन् ।
जाँच गराउने समय :
सोमबार देखि शुक्रवार : बिहान ९ बजेदेखि ५ बजे सम्म
शनिबार र आइतबार : बिहान ९ बजे देखि २ बजेसम्म
कुनै प्रश्नहरूको लागि २४० -२०० -९०९३ मा क्रिस्पर डायग्नोस्टिक संग सोझै सम्पर्क गर्न सकिने छ ।